သောမတ်စ်ဂျီ။ ကင်ဘားလ်၊ Ph.D, LMFT (၂၀၂၀) မှသင်၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသည်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှအလွန်စွဲလမ်းစေသနည်း - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်တွင်
ငါအကြောင်းကိုစတင်ခဲ့သည် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသည်စွဲစွဲလမ်းစေသောအရာဖြစ်သည် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရပြီးနောက်ဆီးလမ်းကြောင်းကုသရေးဆေးခန်းတွင်အလုပ်လုပ်နေသည့်ဆရာဝန်၏လက်ထောက်ကကျွန်ုပ်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်စွာချဉ်းကပ်ခဲ့သည်။ သူကကျွန်တော့်ကိုအသက် ၁၈ နှစ်မှ ၂၅ နှစ်အကြားပေါ်ထွန်းလာနေသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသားများ၊ Erectile Dysfunction (ED) နှင့်ဆက်စပ်သောပြproblemsနာများနှင့်ဆေးခန်းသို့လာနေကြောင်းပြောပြသည်။ ၎င်းသည်ယခုအသက်အပိုင်းအခြားအတွင်းပုံမှန်မဟုတ်သောပြproblemနာဖြစ်သည် (မူရင်းဆောင်းပါးလင့်ခ်).
သူတို့ကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ ED ကိုရှင်းပြချက်နဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲထပ်ကျပါတယ်။ အမှန်မှာထိုအမျိုးသားအများစုသည်အထူးသဖြင့်သင့်တော်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်အကဲဖြတ်မှုများအရဤလူငယ်များကြားတွင်တူညီသောပိုင်းခြေမှာစားသုံးမှုမြင့်မားခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုနေ့စဉ်ကြည့်ရှုခြင်းတို့ဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ အဲဒါကငါစူးစမ်းချင်တဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းအချို့ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုရှိမရှိပြtheနာကိုလည်းပေါ်ပေါက်စေသည်။
စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများနှင့်စွဲ၏နာတာရှည် ဦး နှောက်ရောဂါ
ရိုးရိုးလေးအဖြေကတော့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေဟာ ဦး နှောက်ထဲကမူးယစ်ဆေးဝါးတစ်ခုလိုပြုမူတာဖြစ်တယ်။ ၎င်းသည်အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များတွင်အလွန်အစွမ်းထက်နိုင်သည်။
သုတေသီများက Love, Laier, Brand, Hatch နှင့် Hajela (၂၀၁၅) သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အာရုံကြောသိပ္ပံကိုလေ့လာစူးစမ်းသည့်လေ့လာမှုများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးထုတ်ဝေခဲ့သည်။ သူတို့တွေ့ရှိခဲ့တာတွေကဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်။ အင်တာနက်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသောလူများ၏ neuroimaging ရလဒ်များကိုစစ်ဆေးသည့်လေ့လာမှုများကအရက်၊ ကိုကင်းနှင့်နီကိုတင်းတို့အတွက်တွန်းအားနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးတုံ့ပြန်မှုများနှင့်တူသော ဦး နှောက်၏ဒေသတွင်လှုပ်ရှားမှုများကိုဖော်ပြသည်။1
အတင်းအဓမ္မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများပြုသူဟုသတ်မှတ်သူများသည် ဦး နှောက်တွင်မလှုပ်ရှားနိုင်မှုဟုသတ်မှတ်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ဦး နှောက်တွင်တုန့်ပြန်မှုပိုမိုများပြားသည်။ ထို့ကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုခြင်း၊ အထူးသဖြင့်သဘာဝမကျေနပ်မှုဖြစ်လာသည့်အခါ၊ အရက်နှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများကဲ့သို့တူညီသောနောက်ကွယ် ဦး နှောက်ကွန်ယက်များကိုတက်ကြွစေသည်။
ဤလေ့လာမှုများကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအတင်းအကျပ်နှင့်အဆက်မပြတ်အသုံးပြုခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကဲ့သို့အစွမ်းထက်ကြောင်းကြီးမားသောသက်သေအထောက်အထားများကိုပေးသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်ပတ်သက်သောလေ့လာမှုများအားအသေးစိတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ဆွေးနွေးခြင်းများကိုလေ့လာနိုင်သည် Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက် website က။2
အရက်သောက်သူတိုင်းသည်အရက်စွဲသူများမဟုတ်ကြောင်းကြေငြာခြင်းသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါသည်။ အင်တာနက်အပြာစာပေရုပ်ပုံများအတွက်လည်းအလားတူပင်ဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုကြည့်တဲ့သူတိုင်းစွဲလာမှာမဟုတ်ဘူး။
အပြာစာပေရုပ်ပုံများစွဲစွဲလမ်းသွားခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်တူညီသည်။ ဥပမာ၊ တစ်ချိန်ချိန်တွင်လူတစ် ဦး သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ထိတွေ့ကာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစတင်စမ်းသပ်သည်။
ဤလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်သည်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်တိုးတက်မှုအပေါ်မူတည်သည်။ ထိုသူသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအမျိုးအစားများကို ပို၍ နက်ရှိုင်းစွာရှုမြင်သည်။ ထို့အပြင်ရပ်တန့်ရန်ကြိုးစားသည့်အခါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများကိုလည်းစတင်ခံစားရသည်။ ထို့နောက်အချို့အဘို့, အမျိုးမျိုးသောမျိုးဗီဇ, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များကြောင့်စွဲ။
အမေရိကန်ဆေးစွဲဆေးပညာအသင်း (ASAM) ကအရက်နှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပြင်စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများပြုလုပ်ခြင်းသည်နာတာရှည် ဦး နှောက်ရောဂါစွဲလမ်းမှု၏အထင်အရှားပြသနိုင်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသည်။
သူတို့၏စွဲလမ်းမှုကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရာတွင် ASAM သည်“ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာပြသခြင်းနှင့်စွဲလမ်းမှု၏ရှုပ်ထွေးမှု” တို့အတွက်အရေးကြီးသောအပိုင်းကိုတင်ပြသည်။ ဤအပိုင်းသည်စွဲလမ်းမှုသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအပါအ ၀ င်လိင်ဆိုင်ရာအပြုသဘောဆောင်သည့်အပြုအမူများတွင်လည်းပြသရန်ခိုင်မာသောညွှန်ကိန်းများဖြစ်သည်။
အလွန်အကျွံအသုံးပြုမှုနှင့် / သို့မဟုတ်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု စွဲလမ်းစေအပြုအမူတွေပိုမိုမြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းနှင့် / သို့မဟုတ်ပမာဏသည်ရည်ရွယ်ထားသူထက်မကြာခဏအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ရန်မအောင်မြင်သောဆန္ဒနှင့်မအောင်မြင်သောကြိုးပမ်းမှုများနှင့်ဆက်စပ်လေ့ရှိသည်။
ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများမှပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံးအချိန်အလွန်အကျွံအချိန် စွဲလမ်းအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုလူမှုရေးနှင့်လုပ်ငန်းခွင်လည်ပတ်မှုအပေါ်သိသိသာသာဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူ (ဥပမာ - လူပုဂ္ဂိုလ်များအကြားဆက်ဆံရေးပြproblemsနာများပေါ်ပေါက်လာခြင်းသို့မဟုတ်အိမ်၊ ကျောင်း၊ အလုပ်တွင်တာဝန်ဝတ္တရားများကိုလျစ်လျူရှုခြင်း)
ဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု စွဲလမ်းစေအပြုအမူတွေပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းကြောင့်သို့မဟုတ်ပိုမိုဆိုးရွားလာစေနိုင်သည့်ရူပဗေဒသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသော်လည်း ဆက်စပ်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေ.
ဥပမာ၊ Grubbs, Volk, Exline နှင့် Pargament (၂၀၁၅) သည်အင်တာနက်အပြာစာပေစွဲစွဲမှု၏တိုတောင်းသောအတိုင်းအတာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအတည်ပြုခဲ့သည်။ ၎င်းကို Cyber ​​Pornography Use Inventory (CPUI-9) ဟုခေါ်သည်။.4
တူရိယာအတွက်မေးခွန်းကိုးခုရှိပါတယ်။ ၎င်းတို့ကို ၁ မှ (အားလုံးမဟုတ်) မှ ၇ အထိ (အလွန်အမင်း) မှစကေးပေါ်တွင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်မေးခွန်းများကိုမှန်ကန်စွာ (သို့) မှားယွင်းစွာဖြေဆိုနိုင်ပါသည်။ စုစုပေါင်းရမှတ်သည်ရိပ်မိသောညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းမှုကိုအကဲဖြတ်သည်။
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုအလားအလာနှင့်ထိုကဲ့သို့သောစွဲလမ်းမှုဖြစ်စေသည့်အကြောင်းအချက်များကိုမေးခွန်းများ၏ရည်ရွယ်ချက်အတွင်းတွင်တွေ့နိုင်သည်။ ၎င်းတွင်လူတစ် ဦး ၏အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်ကြိုးပမ်းခြင်း၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြdistနာများနှင့်လူတစ် ဦး ၏အပြုအမူကိုအတင်းအကျပ်စေခိုင်းမှုတို့ပါဝင်သည်။
ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုဖို့အရေးကြီးတဲ့ ဦး စားပေးချန်ထားပြီ
နာမည်ကြီးစာရေးဆရာပက်ထရစ်ကာနက်စ်၏စာအုပ်များ အရိပ်ထဲကထုတ် နှင့် နူးညံ့သိမ်မွေ့သောလမ်းကြောင်း ပိုမိုသောအချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးခရီးကိုစတင်ရာ၌မယုံနိုင်လောက်အောင်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်
1. ချစ်ခြင်းမေတ္တာ, တီ, Laier, C တို့, အမှတ်တံဆိပ်, အမ်, Hatch, အယ်လ်, & Hajela, R. (2015) ။ အင်တာနက်အပြာစာပေစွဲလမ်းမှု၏အာရုံကြောသိပ္ပံ - ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အသစ်ပြောင်းခြင်း။ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ, (5), 388-423 ။
၂ ။ https://www.yourbrainonporn.com/brain-scan-studies-porn-users
3. ဆေးစွဲအမေရိကန်ဆေးအသင်း (ASAM) ။ စွဲ၏ရှည်လျားသောအဓိပ္ပာယ်။ https://www.asam.org/quality-practice/definition-of-addiction
4. Grubbs, JB, Volk, အက်ဖ်, Exline, JJ, & Pargament KI (2015) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း - စွဲလမ်းမှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှုနှင့်အတိုချုပ်အတိုင်းအတာကိုအတည်ပြုခြင်း။ လိင်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 41 (1), 83-106 ။